भारतीयको दादागिरीले बैंकको साख ओरालो
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ बैशाख ७ शुक्रबार |
काठमाडौं, ७ बैशाख । नेपाली भूमिमा भारतीय दादागिरीका बारेमा हामी जानकार नै छौं । हालै एउटा यस्तो दादागिरी बाहिर आएको छ जुन तरंगले बैङ्किग क्षेत्रमा नै खैलाबैला मच्चाएको छ । जसका कारण सबै वाणिज्य बैंकहरुका कर्मचारीहरु तीन छक्क परेका छन ।
एभरेष्ट बैंक भित्रको बेथितिले निक्षेप कर्ता र शेयरधनी चिन्तामा मात्रै परेका छैनन् यही क्रम बढेदेखि उनीहरुको पुर्पुरोमा हात हुने पक्का पक्की छ । प्रायः सबै नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी र नेपाली सेनाको अर्बौं रकम वाणिज्य बैंकहरूमा चर्को ब्याजमा राख्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।
चर्को ब्याजसँगै ती संस्थाका प्रमुख र लेखा अधिकृतहरूलाई १।५ प्रतिशत घुस समेत दिइने प्रचलन छ । यसै अनुरूप भारतीय पञ्जाब नेशनल बैंकको समेत लगानी रहेको एभरेष्ट बैंकले नागरिक लगानी कोषको करिब ३ अर्ब पैसा ११।२५ प्रतिशत ब्याज दिएर भित्राएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका सबै सदस्य बैंकहरूका सीइओ सदस्य रहेकाहरूको पूर्ण बैंठकले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरे पनि रातारात तरलता अभाव भएको भन्दै एभरेष्ट बैंकका सीइओ सोमेश्वर सेठले १।५ प्रतिशत घुस र ११ प्रतिशत चर्को ब्याज दिएको खबर छ ।
नेपाली सभासदहरूको सम्पूर्ण सूचना भारत पुर्याउने काममा समेत लागिपरेको एभरेष्ट बैंकबाट सबै सभासदहरूले खाता खोल्नुपर्ने टेण्डर समेत हात पारेको थियो ।
नेपाली माटोमा यसरी ठगी गरिरहँदा र सूचना बेचिरहँदा समेत उनीहरूमाथि कारबाही भएको छैन । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका नालायक गर्भनर डा। चिरन्जीवि नेपाल एभरेष्ट बैंकलाई छानबिन समेत गर्दैनन्, कारबाहीको त कुरै छैन,’ एक बैंकरले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । ‘यदि बैंकर्स संघको निर्णय नमान्ने हो भने एभरेष्ट बैंकका सीइओ सोमेश्वर सेठले संघबाट राजीनामा दिनु पर्दछ ।
तीन भारतीय कर्मचारीको दादागिरीले बैंकको साख ओरालो
भारतीय पञ्जाब नेशनल बैंकबाट पठाइने तीन भारतीय कर्मचारीको दादागिरीले बैंकको साख दिनप्रतिदिन ओरालो लागेको छ ।
तीन भारतीय कर्मचारीले एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत ६५० नेपाली कर्मचारीहरु माथी निरंकुशता लादेको छ समाचार स्रोतले भन्यो । ६५० कर्मचारीहरु मध्ये ३,४ जना चाकडीदार कर्मचारीको आडमा उनीहरुले हाली मुहाली गरेका छन् स्रोत भन्छ ।
सीइओ सोमेश्वर सेठ भारतीय पञ्जाब नेशनल बैंकको बढुवामा असक्षम भएपछि नेपालमै अड्डा जमाएर बसेका छन् । भारतिय पञ्जाब नेशनल बैंकको जिएमका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका सीइओ सोमेश्वर सेठ प्रारम्भिक चरणनै उर्तिण गर्न नसके पछि नेपाल नछोड्ने तारतम्बे मिलाएका छन् ।
त्यसैगरि बैंकका डिजिएम राजेश गौतमको नालायकी पनले पनि बैंक दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्ने क्रममा रहेको छ । चियरम्यान बिके श्रेष्ठलाई चाकडी पुर्याएकै भरमा तिन बर्षे असफल कार्यकाल सकिए पनि अझै समय अबधि लम्ब्याएर उनले राइदाइ मच्चाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको स्विकृत विना उनको राज चलेको देखेर बैंकका कर्मचारीहरुले जिब्रो टोकेका छन् । महिला कर्मचारीसँग अनैतिक सम्बन्ध गासेको भन्दै उनको भित्रभित्रै चर्को आलोचना भएको छ । त्यसैगरि अर्का डिजिएम राजिब जैन भारतीय पञ्जाब नेशनल बैंकको बढुवा कार्यतालिकामा सामेल समेत भएनन् ।
एक कर्मचारी बढुवा सिटमै नगएपछि बैंक भित्र खैलाबैला नै मच्चिएको थियो । उनी किन गएनन् बढुवा सिटमा ? नेपालमा नसोंचेको मोज गर्न पाएपछि किन जाने ?
कि कसो जैन जी रु नेपालमा रहेका यी तिन कामदारलाई बैंकले घर बंगाला ,गाडी ,डूाईभर र सहयोगी समेत दिएको छ । यसरी काम भन्दा भोजमा सक्रिय हुदै बैंकमा लुट मच्चाउने क्रम बढे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर जस्तै बनेको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।